G/W/S/040/03 London, 24/12/2003
Mudanayaal Marwooyin walaalayaal,
Golaha wadatashiga Soomaaliyeed wuxuu maamullada ka jira gobollada W/galbeed iyo W/bari uga digayaa qabanqaabada dagaal ee ay maalmihii ugu dambeeyay abaabulayeen ama ay ku baaqeen.
Golaha wadatashiga Soomaaliyeed wuxuu ugu baaqaya in ay ka joogsadaan madaxda iyo hogaamiyayaasha maamuladaas colaadaha ay ku baaqayaan xubno ka tirsan maamuladaas ka jira magaalooyinka Hargeysa iyo Garoowe.
Waxaa iyana ah wax laga xumaado colaadaha soo noqnoqday ee maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay magaalooyinka "Xeeraale iyo Ceelbuur", dagaaladaas oo lagu waayay naf iyo maal fara badan, waxaan ugu baaqeyna qeybaha uu ka dhexeeyo in khilaafkoodu wadahadal lagu xaliyo.
Waxaan madaxda iyo hogaamiyayaasha Soomaaliyeed guud ahaan ka waanineynaa in ay horseed dadkooda ugu noqdaan dagaallo sokeeye oo dib uga dhaca dalka, kana waantoobaan baaqyada xambaarsan colaadaha, iyadoo inta la og yahay halaaga iyo burburka dalkeena ka dhacay ilaa maanta aan guul lagu gaarin, waxaan idiin leenahay burburinta badala nabad iyo wada noolaanshiyo dhexmara dadka aad dooneysaan in ad madaxda u noqdaan.
Golaha wadatashiga Soomaaliyeed wuxuu taageerayaa dadaal kasta oo ay madaxda iyo siyaasiyiinta Soomaalida ku dhameynayaan khilaafka u dhexeeya sida kulamada iyo dadaalada nabadeed ee maalmihii ugu dambeeyay ay wadeen qeybaha siyaasadda ee W/muqdisho iyo madaxda RRA.
Kenya: Hogaamiyayaasha SRRC Qaar Kamid ah oo Diyaarad Militari Laga Daba Diray
Kaddibna lagu soo celiyey Nairbi, laakiin markii dambe... Guji
Shir Looga Wada hadlay Dhismaha Jaamacada Mudug
Galkacyo: Shir looga hadlayay dhismaha Jaamacad laga dhisayo Gobolka Mudug ayaa lagu qabtay dugsiga Sare ee Cumar Samatar Guji